के तपाईलाई थाहा छ ? चन्द्रमामा पनि भुइँचालो जान्छ भनेर .. – Ujyaalo Patrika
के तपाईलाई थाहा छ ? चन्द्रमामा पनि भुइँचालो जान्छ भनेर ..
भुइँचालो पृथ्वीमा मात्र जाँदैन। चन्द्रमामा पनि जाने अमेरिकाको नेसनल एयर स्पेस म्युजियमले जानकारी दिएको छ। यतिबेला चन्द्र सतहमा चकम्प (चन्द्रमा कम्प) अर्थात भुइँचालो गइरहेको छ।
म्युजियमका अनुसार चन्द्रमाको भित्री सतह चिसिँदै गएकाले खुम्चिँदै गएको छ। अहिलेसम्म चन्द्रमा ५० मिटरजति खुम्चिसकेकाले नै त्यहाँ चकम्प अर्थात भुइँचालो गइरहेको म्युजियमले जनाएको छ। केही चकम्प ५ रिक्टर स्केलसम्मका पनि छन्।
म्युजियमका वैज्ञानिक टमस वेटर्सका अनुसार चन्द्र सतह खुम्चिँदा त्यहाँ पनि फल्ट (धाँजा) बनिरहेका छन्। एउटा सतह अर्कोमाथि खप्टिइरहेका छन्। यसबाट तीव्र गतिमा चकम्प आइरहेको उनको भनाइ छ। यस्ता फल्ट भ¥याङजस्तै छन्। कुनै कुनै त १० मिटरसम्म अग्ला छन्। यी कैयौं किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएका छन्।
वेटर्सले चन्द्रमाका अपोलो अभियान ११, १२, १४, १५ र १६ ले चन्द्र सतहमा सिस्मोमिटर्स राखेको बताए। त्यसबाट पाएको तथ्यांक अध्ययन गर्दा चकम्पबारे पत्ता लागेको हो। नासाले पठाएको लुनार स्पेसक्राफ्ट (एलआरओ) ले फल्टबारे सटिक जानकारी पठाउँछ। रिपोर्ट नेचर जियोसाइन्स जर्नलमा प्रकाशित छ।
डिबेट शोमा पुगेकी नायिका स्वरा भास्कर एक पटक पुनः आफ्नो बयानका कारण ट्रोल भइरहेकी छिन् । एनआरसी र सिएएको विषयमा चलिरहेको डिबेटमा स्वराले एक प्रश्नको जवाफमा भनिन्, ‘म सन् २०१० मा १५ वर्षकी थिएँ । उनको यो बयानपछि सोसल मिडियामा उनलाई लगातार ट्रोल गरिँदैछ । स्वरासँग नायक मोहम्मद जीशान अयूब र तिग्मांशु धूलियामा पनि उपस्थित थिए ।
नायिकालाई सोधिएको थियो, ‘सन् २०१० मा जब एनपीआरको प्रक्रिया सुरु भयो तब तपाईंलाई समस्या भएन ? ’ यसको जवाफमा स्वराले भनिन्, ‘म सन् २०१० मा १५ वर्षकी थिएँ । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले लगातार उनको मजाक उडाइरहेका छन् । ट्वीटरमा ३ःबतजझबतष्अष्बलक्धबचब ट्रेन्ड गरिरहेको छ । विकिपिडियाका अनुसार स्वराको जन्म ९ अप्रिल सन् १९८८ मा भएको थियो ।
Previous खुशीको खबर : अब ८ हजार किस्ताबाटै यी चर्चित मोटरसाइकल किन्न सकिने
Next एउटा फोनको मूल्य ५ अर्ब, यी हुन् संसारका सबैभन्दा महँगा १० मोबाइल फोन
होन्डाको नाममा म्यासेन्जरमा ‘स्पाम’ आतंक, त्यस लिङ्क खोले के हुन्छ ?
निकै सस्तो मुल्यमा २ सिट र ४ सिट भएका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए, मोटरसाइकलकै मुल्यमा किन्न सकिने . . .
४८ वटा राज्यद्वारा फेसबुकलाई मु,द्दा : के अब फेसबुक बन्द होला ?